Xarunta tareenada ee Stockholm oo loogu hanjabay in bambo lagu qarxiyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Otto Marand/Sveriges Radio
Xarunta tareenada ee Stockholm oo loogu hanjabay in bambo lagu qarxiyo
La daabacay fredag 16 augusti 2013 kl 14.04
Waxaa maanta gelinkii hore soo gaarey boliiska Stockholm hanjabaad in bambo lagu qarxin doono xarunta dhexe ee tareenada. Boliiska ayaa telefoon ka helay qof isqariyey saacaddu markii ay ahayd 10:00, laakiin boliisku waa uu ka gaabsaday in uu ka warbixiyo dhab ahaanta hanjabaaddaan.
– Wa arun in hanjabaad naloo soo gudbiyey, laakiin ma doonayo inaan si hoos ah uga hadlo aarrintaan. Sidaasna waxaa yiri Sven-Erik Olsson ee ka hawlgala xarunta dhexe ee boliiska gobolka.
Markii hanjabaaddaas la soo gudbinayey waxaa la socday shuruudo la dalbanayo. Intii uu hadalkaasi socdayna waxaa marar badan carrabka lagu dhufanayey xarunta dhexe ee tareenka.
Boliisku wuxuu dhacdadaan ku sifeeyey ”xaalad gaar ah”, oo ah sifeyn ay boliisku isticmaalaan marka ay xaalad khatar ahi timaaddo.
Boliisku wuxuu durbadiiba halkaas u diray koox ciidamada boliiska ka mid ah oo tallaabooyin baaritaan halkaask u sameeyey. Waxaa hadda boliisku halkaas ka raadinayaan shakhsi halkaas ku sugan. In kastoo hanjabaaddaas la helay haddana weli lama xirin xarunta tareenada. Waxaa kaloo halkaas yimid ambalaas iyo kooxda gurmadka.
Ma jirtaa wax khatar oo dadweynaha looga digaayo?
– Maya, oo ilaa hadda ma haynno wax cad oo sidaas muujinaya, ayuu yiri Sven-Erik Olsson.
Sven-Erik Olsson wuxuu intaas ku daray in baaritaanadii uu boliisku sameeyey ilaa hadda aan lagu arag in hanjabaaddaasi ay sidaas khatar u tahay, laakiin uu boliisku sii wadaayo hawlihii.
Dhanka kale shirkadda Jernhusen ayaa sheegtay in tareenadu ay siddi caadi ahayd uga baxaan una soo galaan xarunta tareenada. Weriye ka socda idaacadda Ekot oo halkaas joogana ayaa sheegay in jawigu deggan yahay oo aan xarunta laga dhex arkin boliis lebbisan.
Boliiska wuxuu sheegayaa in maanta saacaddu marka ay tahay kowda duhurnimo ay iyaga iyo kooxda gurmadku waddooyinka ka qaadi doonaan qalabkii ay ku xireen. Sidaasna lagu soo gebagebeyn doono hawlihii baaritaanka oo boliisku ka wadey xarunta tareenada ee Stockholm.